I-Kucoin - I-Crypto Trading Robots - I-BTC ETH XRP SOL DOT EGLD FLOW DUZE ...
4 Amarobhothi e-Crypto
Amarobhothi okuhweba ama-Crypto
Sebenzisa amarobhothi okuhweba ngokuzenzakalelayo e-Kucoin ngokuya ngamapheya emali anikezwa yilokhu kushintshaniswa okwaziwayo emhlabeni jikelele. Thengisa ama-cryptocurrencies nsuku zonke, njalo ngehora, usebenzisa amasu ama-4 ahlukene (Ikusasa / Igridi ye-Spot / I-Smart Rebalance / DCA).
Bhalisa kumarobhothi e-Kucoin okokufundisa
Izinzuzo zamarobhothi e-Kucoin
Kulula kakhulu ukusebenzisa. Bhalisa ku-Kucoin. Khiqiza amaholo ngokuya ngama-algorithms kanye nemikhuba yemakethe ye-crypto.
Amarobhothi angu-4 anesu elihlukile lokutshala izimali kanye nengozi
Ngokwethulwa okusha ngakunye, uzoba yisiphukuphuku. Kuzothatha imizuzu / amahora ambalwa ukuze izindlela zokuthenga nezokuthengisa zimiswe ngendlela efanele. Imali oyitholayo izoncika nasekuguqukeni, okuhle noma okubi, kwe-cryptocurrency ekhethiwe.
Yenza inzuzo ngokutshala imali njalo
Irobhothi le-DCA Kucoin
Ukusatshalaliswa kwezingozi esikhathini eside
I-Robot Rebalance Kucoin
Okude / Okufushane ukusizakala ngawo womabili amathrendi
I-Robot Futures Grid Kucoin
Ukuguquguquka okukhethekile. Indlela: thengisa kakhulu futhi uthenge okuphansi
I-Robot Spot Grid Kucoin
Isinyathelo 1 / Kucoin
Sebenzisa irobhothi lakho le-crypto Kucoin
Njengamanje, amarobhothi okuhweba e-Kucoin atholakala kuphela kuhlelo lokusebenza lweselula lwe-Kucoin.
Ukuwasebenzisa, vakashela ideshibhodi yohlelo bese uchofoza isithonjana: Irobhothi Lokuhweba
Ungakhetha amarobhothi okuhweba ama-4 ngokuya ngamasu ahlukene.
Igridi ye-Spot : Lawa marobhothi asizakala ngokushintshashintsha kwe-cryptocurrency ngokuthenga okuphansi futhi adayise kakhulu ngokuvamile ngokumelene ne-stablecoin njengeUSDT.
I-Smart Rebalance : Basakaza ubungozi ngokuhweba isikhathi eside.
I-Futures Grid : Lawa marobhothi ashintshanisa amathrendi amabili: isikhathi esifushane neside.
DCA : Lawa marobhothi akhiqiza inzuzo ngenxa yokutshalwa kwezimali okuvamile okulungisile. Ngokwesibonelo, $50 ngesonto.
Isinyathelo 2 / Kucoin
Khetha ipheya yemali ozohweba ngayo ngokuzenzakalela
Khetha ipheya yemali ozohweba ngayo ngokuchofoza unxantathu. Emkhakheni wokusesha, bonisa impahla ye-crypto ofuna ukuhwebelana nayoUSDT.
Bese uchofoza kwesinye seziphakamiso ezibonisiwe. Amarobhothi abalwa ngokwephesenti lawo leholo ngonyaka.
Qinisekisa irobhothi lakho le-crypto ngokuchofoza inkinobho ethi Dala
Ngikweluleka ukuthi ukhethe i-cryptocurrency yakho ngokuya ngokuvela kwayo kanye nokuthambekela kwayo ku-Coingecko noma ku-Coinmarketcap.
Isinyathelo 3 / PTSD
Lungiselela irobhothi lakho Kucoin.
Bonisa ukuthi inani lempahla liyashintsha yini noma cha kanye nenani lama-oda ansuku zonke. Vumela irobhothi liphathe le ngxenye yodwa.
Ngakolunye uhlangothi, khombisa inani lokutshalwa kwezimali ofuna ukulinika leli robhothi.
Bese uchofoza kokuthi Dala
Isinyathelo 4 / Kucoin
Ukuhlolwa kokugcina kwamapharamitha ngaphambi kokusebenza ngokushesha.
Hlola kabili idatha bese uchofoza ku-Qinisekisa
Isinyathelo 5 / Kucoin
Ukuthunyelwa kwerobhothi ye-Kucoin.
Kuhlelo lokusebenza, uzobona uhlu lwamarobhothi asebenzayo njengamanje. Ungazimisa noma kunini. Ngesikhathi sokuma ngakunye, uzoba nethuba lokugcina impahla oyifunayo.